Myanmar Gays Heaven: big myanmar rocket
Posted by Myanmar Gays Heaven at 10:31 AM
Anonymous March 23, 2014 at 2:48 AM
ခံချင်စရာ လီး ကြီးပါလား... ငုံလိုက်ရင် ပါးစပ်နဲ့တောင် ဆန့်ပေါ့မလား..
crazy man March 12, 2015 at 8:45 AM
Lion King December 1, 2015 at 8:52 AM
TTT August 7, 2015 at 10:01 PM
စင်ကာပူမာ ဘယ်သူရှိလဲဗျ၊၊ အသက်၂၁၊ကျောင်းတက်နေတယ်၊၊၊ရုပ်ချော၊ top only. ရွယ်တူနဲ့ ငယ်တာဆိုရင် စိတ်ဝင်စားတယ်။. Viber# +959976723543 . Skype # oscarlinlet
Moe Thauk September 23, 2015 at 12:45 PM
min khant moe October 1, 2015 at 7:19 AM